बास्कुनाबाट १२ लाखको सुन्तला निर्यात | eAdarsha.com
बास्कुनाबाट १२ लाखको सुन्तला निर्यात
म्याग्दी, १९ पुस। धान खेतमा अभियानकैरूपमा सुन्तला विस्तार गरेका सिंगा १ र २ का किसान यस वर्ष सिजनमा रु. १२ लाख बराबरको सुन्तला बिक्री गर्न सफल भएका छन्।
जिल्ला सदरमुकाम बेनीबाट तीन घन्टाको पैदलदूरीमा पर्ने बास्कुनामा ३० घरपरिवारले व्यावसायिकरूपमा सुन्तलाखेती गर्दै आएका छन्।
तीन हजार सुन्तलाका बोटबाट गाउँमा रु. १२ लाख भित्रिएको बास्कुना कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तिलक गुरुङ बताउँछन्। यहाँका किसानले सुन्तला खेतीबाट रु. २० हजारदेखि रु. तीन लाखसम्म आम्दानी गर्न सफल भएका छन्।
मलिलो माटो र उचित हावापानीका कारण बास्कुनाको सुन्तला तुलनात्मकरूपमा स्वादिलो, गुलियो र ठूलो हुने भएकाले व्यापारी र उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा पर्ने गर्दछ।
जिल्लाका अन्य स्थानमा उत्पादन हुने सुन्तला फुटकररूपमा बिक्री हुने भए पनि त्यहाँ उत्पादित सुन्तला सिधै काठमाडौँ पुग्ने गरेको कृषक नरबहादुर केसीले बताए।
‘बजारीकरणका लागि समस्या छैन, जति उत्पादन गर्न सकियो त्यति नै धेरै फाइदा हुन्छ, उनले भने। यसअघि कृषि सङ्घबाट आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका किसानले रु. पाँच हजार लगानी गरेर हालै सहकारी सवडिभिजन कार्यालय बागलुङमा सहकारी दर्ता गरेका छन्।
गाउँमा उत्पादित सुन्तला काठमाडौँका व्यापारीले प्रतिकिलो रु. ६० मा खरिद गरेको सहकारीका सचिव शेरबहादुर केसीले बताए। सहकारीमार्फत सुन्तलाखेतीलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना बनाइएको सचिव केसीको भनाइ छ। लामो समयदेखि आफूहरूले सिँचाइको समस्या झेलिरहेको भन्दै बालम खोला सिँचाइका लागि सिँचाइ मन्त्रालयमा समेत मागपत्र पठाइएको अध्यक्ष गुरुङले बताए।